कुन राशिका मानिस कति सन्की हुन्छन् ? थाहापाउनुहोस् – Hamro Nepali Samachar
Home/ बिबिध/कुन राशिका मानिस कति सन्की हुन्छन् ? थाहापाउनुहोस्
मानिसको स्वभावमा उसको राशिले पनि प्रभाव पार्छ| कोहि मानिस खुसमिजास हुन्छन्, कोहि रिसाहा हुन्छन्, कोहि मानिस निकै संकी हुन्छन्| मानिस कति संकी छ भनेर उसको राशिले पनि प्रभाव पार्छ|
सनकपनाको मामलामा यस राशिका मानिस सबैभन्दा संकी हुन्छन्| यिनीहरुलाई बहुत कम चिज मन पर्छ तर मन परेको चिज प्राप्त गर्न हर हद पार गर्न तयार हुन्छन्| यिनीहरुको सनकपनाको वयान गर्न सकिंदैना| यिनीहरु कुनै कार्यमा सफल भएनन् भने उक्त कार्यको जिम्मेवार अर्कोलाई ठहराईदिन्छन्|
सनकपनाको मामलामा यस राशिका मानिस पनि कम हुँदैनन्| काम जस्तोसुकै होस्, सानो होस् वा ठूलो, यिनीहरू सबैका बारे धेरै उत्साहित हुन्छन्। तर यिनीहरूको विशेष गुण भनेको उनीहरू आफ्ना गल्तीहरू स्वीकार्न जान्दछन्। यदि उनीहरूले आफ्नो गल्ती थाहा पाए भने , यिनीहरु यसलाई सुधार गर्न धेरै प्रयास गर्छन् र सुधार गरेरै छोड्छन्।
कर्कट राशिका व्यक्तिहरू कुनै पनि चीजको बारेमा धेरै उत्साहित हुन्छन् तर उनीहरू आफ्ना गल्तीहरू स्वीकार्दैनन्। तसर्थ, यिनीहरू कहिले पनि यी अवस्था बुझ्दैनन्। यस राशिका मानिस पनि निकै संकी हुन्छन्|
कन्या राशिका व्यक्तिहरु पनि सनकपनाको मामलामा कोहि भन्दा कम हुँदैनन्। यिनीहरूले अरूलाई मात्र होइन आफैलाई पनि जज गर्छन्। यिनीहरूको सबै चीजमा कमी-कमजोरी खोज्ने बानी हुन्छ। यहि कारण हो जब यी व्यक्तिले केहि कुरा वा व्यक्तिलाई पछ्याइरहेका छन् भने यिनीहरुबाट पिछा छुटाउन असम्भव छ|
तुला राशिका मानिस यो मामलामा सबैभन्दा पछाडि हुन्छन्| यिनीहरु कुनै पनि चिजलाई लिएर संकी हुँदैनन्| तर आफुलाई बचाउने अवस्थामा भने यिनीहरुको पूरा सनकपना बाहिर आउँछ|
धनु राशि सनकपनाको मामलामा सबैभन्दा माथिको श्रेणीमा पर्छन्| यिनीहरु बुद्धिमानी र तेज दिमागका हुन्छन्, यिनीहरुलाई पराजय सहन हुँदैन| यिनीहरूको मनोवृत्ति यस्तो हुन्छ कि यदि यिनिहारू पराजित भए भने, तब सबैजनाले यसको असर भोग्नुपर्छ। यसले यिनीहरूको सनकपना नकारात्मक बनाउँछ।
यस राशिका मानिस आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दैनन्| त्यसैले कहिले काही यस्तो अवस्था आयो भने यिनिहरु निकै रिसाहा स्वभावका हुन्छन्| यिनीहरु पनि आफुले आफैंलाई सर्वोत्तम मान्छन्| यहि कारणले गर्दा यिनीहरु निकै संकी स्वभावका हुन्छन्|
पानी तत्वले चन्द्रमाको प्रतिनिधित्व गर्दछ, जुन दिमागी उग्रतासँग जोडिएको छ। यस पानी तत्व कुम्भमा प्रबल हुन्छ। यिनीहरूको विशेष खुबी यो हो कि यिनीहरू सजिलैसँग कुनै ठूलो भार सम्हाल्न सक्छन्, तर जब यिनीहरूलाई कुनै कुराले निराश पार्छ, तब यिनीहरु भन्दा बढि संकी कोहि हुँदैन।
यस राशिका मानिस सधैँ कुनै न कुनै कुरालाई लिएर दुखी रहन्छन्| तर यिनीहरु आफ्नो गल्ति कहिल्यै पनि स्वीकार्न तयार हुँदैनन्| यिनीहरु निकै संकी भएता पनि कुनै पनि प्रकारको असफलताले हरेस खाँदैनन्|
महाभारतको युद्ध सकिएर कृष्णको देहत्याग पछि पाण्डवहरुको के भयो ?
महाभारतको युद्ध भयो । असाध्यै धेरै मानिसहरुको मृत्यु भयो । धेरै धनको क्षति भयो । युद्ध जितेका पाण्डवहरुले कृष्णको सहयोगमा विस्तारै आफ्नो देशलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगे । धर्मराज युधिष्ठिरको शासनकालमा हस्तिनापुरका विषयहरू खुशी र समृद्ध थिए । त्यहाँ कुनै शोक र डर आदि थिएन । केही समय पछि अर्जुन श्री कृष्णलाई भेट्न द्वारिकापुरी गए । धर्मराज युधिष्ठिर विशेष गरी चिन्तित थिए किनकी धेरै महिना बितिसकेका थिए तर अर्जुन फर्किएका थिएनन् ।
उनले भीमलाई भने – “हे भीमसेन! द्वारिकाको खबर पाएपछि भाइ अर्जुन अहिलेसम्म फर्केका छैनन् र समयको चाल हेरिरहेका छन् । सबै अशुभ संकेतहरु देखिन थालेका छन् । सूर्यको प्रकाश मध्यम भएको छ र चन्द्रमाको वरिपरि बारम्बार ग्रहण जस्तो घेरिने अवस्था भएको छ ।
आकाशका नक्षत्र र ताराहरू एक अर्कासँग टकराइरहेका छन् । पृथ्वीमा बारम्बार चट्याङ्ग हुन्छ । ठुलो आँधीबेहरी उठ्छ र अन्धकारमा अझ भयानक आँधीबेहरी हुन्छ । स्यालहरु सूर्योदयको अगाडिसम्म कराइरहेका हुन्छन् । कुकुर बिरालाहरू बारम्बार रुन्छन् । गधा, उल्लू, काग र परेवाहरूले रातमा कठोर शब्दहरू बनाउँदछन् । गाईहरूले लगातार आँसु बगाए । पग्लेको नौनीमा पनि आगो बाल्ने शक्ति छैन । जताततै श्रीरहित देखिन्छ । यी सबै चीजहरू देखेर मेरो मुटु धडधडिरहेको छ। थाहा छैन ती दुष्ट मानिसहरूले दुर्भाग्यको के संकेत गरिरहेका छन् । के भगवान श्रीकृष्णचन्द्रले यस संसार छोड्नुभयो वा अरू कुनै दुखद घटना घट्नेवाला छ ?”
भिमसेनसँग युधिष्ठिरले दुखेसो पोखेको केहि समय भएको थियो । डरलाग्दो अवस्थाको साथ अर्जुन द्वारिकाबाट फर्केर आए । उनको आँखाबाट आँसु बगिरहेको थियो, शरीर तागत नभएको जस्तो वभएको थियो। उनी आउने बित्तिकै धर्मराज युधिष्ठिरको खुट्टामा लडे ।
तब युधिष्ठिरले डराएर सोधे- “हे अर्जुन, द्वारकापुरीमा हाम्रा आफन्त र भाइहरू खुसी छन्, के हामी खुसी छैनौ ? हाम्रो बुवा हजुरबुवा शुरसेन र कान्छा काका वासुदेवहरुको अवस्था के छ ? हाम्रो फुपु देवकी र उनका सात बहिनीहरू र छोरा-बुढा-छोरीको अवस्था के छ । के तिमी खुसी छौ ? राजा उग्रसेन र उनको कान्छो भाई देवकको खबर राम्रो छ, के उनीहरु खुसी हुनुहुन्न ? प्रद्युम्ना, अनिरुद्ध, सम्भ, उद्धव आदि आफ्ना सेवकहरूसित ठिक छन् ? न त तिनीहरू नियमित रूपमा उनीहरूको सुधर्म सभामा आउँदछन्, न त सोह्र हजार एक सय उनन्ती छोरीहरू, सत्यभामा, रुक्मिणी, जामवंती आदि छन् । तिनीहरू सँधै आफ्नो सेवामा लागिरहन्छन्, हे भाई अर्जुन! किन तिम्रो कान कमजोर हुँदैछ र किन असंवेदनशील हुँदैछौ ?”
धर्मराज युधिष्ठिरको प्रश्नहरूको चाङले अर्जुन झनै व्याकुल र विचलित भए । उसको रंग फिक्का भयो, उसको आँखाबाट निर्बाध आँसु बग्न थाल्यो, बरु रुवाइ बढेर उनमा बाडुली सुरु भयो । उनले हतास भएर भने, “हे दाई, हाम्रा प्रिय भगवान श्रीकृष्णचन्द्रले हामीलाई धोका दिए । उनले हामीलाई त्यागे र यस संसार छोडे ।
जसको अनुग्रहले देवताहरूले मेरो सामर्थ्यको सामु आफ्नो शिर उठाएनन् । उनीहरूले मेरो अन्तिम सामर्थ्य पनि उनीहरूसँगै लिए । मेरो जीवन मृत शरीर जस्तो भयो । म भगवान् श्री कृष्णचन्द्रका श्रीमतीहरुलाई द्वारकाबाट हस्तिनापुर ल्याउँदै थिए तर बाटोमा केही भिल्लले मलाई असाध्यै कमजोर लडाकुलाई जस्तो हराए । मैले ति अबलाहरुको रक्षा गर्न सकिन । ती मेरा हतियारहरू, उही रथ, उही घोडा, उही गान्डिव धनु र तीरहरू, जसबाट मैले ठूला-ठूलाहरूका टाउको छिनाएको थिएँ । अर्जुन जो आफ्नो जीवनमा कहिल्यै शत्रुबाट टाढा थिएन, उही अर्जुनलाई भिल्लहरूले डरपोकलाई जसरी पराजित गरे ।
भिल्लले श्रीमती र सबै पैसा लुटेर लगेका थिए र म निसस्त्र मानिस जस्तो देखिन्छु । ती भगवान् श्री कृष्णचन्द्र बिना, मेरो सम्पूर्ण शक्ति हराइसकेको छ । द्वारिकामा सोधेका यादवलाई सबै यादव ब्राह्मणको श्रापले दण्डहीनताको स्थितिमा परिणत गरे र उनीहरू एक अर्कालाई अत्यधिक रक्सी पिए र एक अर्काको हत्या गरे । यो सबै उही भगवान श्री कृष्णचन्द्रको नाटक हो ।”
अर्जुनबाट कृष्णको निधन र सम्पूर्ण यदुवंशको विनाशको खबर सुनेपछि युधिष्ठिरले तुरुन्त आफ्नो कर्तव्य निश्चय गरेर अर्जुनलाई भने – “हे अर्जुन, भगवान् श्री कृष्णचन्द्रले यस ब्रह्माण्डको शरीरबाट यस पृथ्वीबाट प्रस्थान लिनुभयो । उहाँले पृथ्वीलाई परित्याग गर्नु भयो । जसरी कसैले काँडाबाट काँढा हटाए पछि ती कुनाको काँडा छोड्छ । अब घोर कलियुग पनि आउँदैछ ।”
जब श्री कुन्तीले भगवान श्री कृष्णचन्द्रको स्वाधम गमनको खबर सुनिन्, उनले श्री कृष्णचन्द्रमा ध्यान गरेर आफ्नो शरीर त्यागिन् । धर्मराजा युधिष्ठिरले आफ्नो महान नाति परीक्षितलाई सम्पूर्ण जम्बुद्वीपको राज्याभिषेक गरे । उनलाई हस्तिनापुरमा राजगद्दीमा बसाए । मथुरापुरीमा अनिरुद्धका छोरा बज्रलाई राजा बनाए । त्यस पछि, सर्वोच्च सत्यवादी युधिष्ठिरले प्रजापति यज्ञ गरे र श्रीकृष्णमा लीन भई सन्यास लिए । उनले मान्छे, अपमान, अहंकार र मोह र वशबाट आफुलाई अलग गरे । सारा विश्वले उनलाई ब्राह्मणको रुपमा हेर्न थाल्यो ।
उनीहरूले आफ्नो कपाल खोलिदिए । शाही पोशाक त्यागिदिए । च्यातिएको लुगा लगाए । खाना र पानी छाडेर मौन धारण गरे । त्यसो गरिसकेपछि उनले कसैलाई हेर्दै नहेरी उत्तर दिशा तिर घरबाट बाहिर निस्के । भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव र द्रौपदीले पनि उनलाई पछ्याए ।
भगवान श्री कृष्णचन्द्रको प्रेममा मोहित भएका तिनीहरू कृष्णको देहत्यागको शोकमा सबै उत्तराखण्डतिर लागे । अर्कोतर्फ, विदुरले पनि प्रभास क्षेत्रमा शरीर छोडेर यमलोकको लागि प्रस्थान गरे । सबै पाण्डव सडकमा यात्रा गरिरहेका थिए श्रीहरिको अठारौ नामहरू गाउँदै । त्यस महापथमा द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन र भीमसेन क्रमशः एक एक गरेर लड्दै गए । अब केवल युधिष्ठिर जीवित थिए अनि उनलाई बाटोबाट पछ्याइरहेको कुकुर ।
भनिन्छ कि उनी देवराज इन्द्रले ल्याएको रथमा चढेर जिउँदै स्वर्ग गए ।
त्यत्रो महाभारतको युद्धबाट प्राप्त भएको राज्य, धन र समृदिले अन्तिम अवस्थामा सबैको साथ छोड्यो । कृष्णको मृत्युबाट सुरु भएको परमधामको यात्रामा सम्पुर्ण यदुवंश लाग्यो । विदुर लगायत पाण्डब र कौरबका अघिल्लो पुस्ता लाग्यो । त्यहि बाटोलाई पछ्याएर पाण्डवहरु पनि परमधाम भए ।
नोट : हामीले महाभारतका छोटा छोटा कथाहरुलाई प्रस्तुत गरेका छौँ । तपाईले यहाँ क्लिक गरेर महाभारतका थप कथाहरु पढ्न सक्नु हुनेछ ।
आफ्नो दुःख अरुलाई सुनाउँदैनन् यी राशिका व्यक्ति, जति पीडा भएपनि सहेरै बस्छन्